15 VPN -ka ugu Fiican ee Bilaashka ah oo Aan Laheyn Kaarka Deynta Oo Loo Baahan Yahay 2022
Bogga ugu weyn 13 VPN ee ugu Fiican Isticmaalayaasha Android iyo iPhone sanadka 2022
13 VPN ee ugu Fiican Isticmaalayaasha Android iyo iPhone sanadka 2022
Sawir laga soo qaaday cawl
Sidee dareemi doontaa markaad ogaato in dhammaan waxaad si qarsoodi ah u samaynaysay ay dhab ahaantii ku jiraan indhaha qof aanad garanayn? VPN la'aanteed qarsoodigaaga intarneedka lama hubo oo gelitaanka mareegaha qaar ayaa wali xaddidan.
Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, sida ugu nabdoon ee internetka si gaar ah loogu dhex maro ayaa ah iyadoo la adeegsanayo mid ka mid ah VPN -ga ugu fiican ee loogu talagalay Android ama VPN -ka iPhone ee adeegsadayaasha macruufka.
Maqaalkani wuxuu kaa caawin doonaa inaad sameyso xulashada saxda ah ee VPN -yada ugu fiican ee loogu talagalay Android iyo iPhone.
Adeegsiga VPN si aad ugu xirnaato internetka waxay kuu oggolaaneysaa inaad si gaar ah oo aamin ah u dhex gasho bogagga internetka sidoo kale aad marin u hesho degellada xaddidan oo aad ka gudubto xannibaadaha faafreebka.
Waa maxay VPN?
A shabakad khaas ah oo wata (VPN) waxa ay ku siinaysaa sirta khadka iyo qarsoodiga adiga oo ka abuuraya shabakad shakhsiyeed isku xidhka interneedka guud. Waa tunnel online ah oo u dhexeeya qalabkaaga iyo intarneedka kaas oo kaa ilaalinaya duleelka khadka, faragelinta, iyo faafreebka.
VPN -yadu waxay qariyaan cinwaankaaga borotokoolka internetka (IP) si ficilladaada onlaynka ah ay yihiin kuwo aan la ogaan karin. Tan ugu muhiimsan, adeegyada VPN waxay abuuraan xiriiro sugan oo qarsoodi ah si ay u bixiyaan asturnaan ka weyn xitaa meel hotspot Wi-Fi oo sugan.
Maxaad ugu baahan tahay VPN?
Adeegsiga VPN waa hab wax ku ool ah oo lagu ilaalinayo taraafikada intarneedka isla markaana howlahaaga iyo aqoonsigaaga khadka tooska ah looga dhigo. Markaad ku xirto mid ka mid ah VPN -yada ugu fiican ee adeegsadayaasha Android ama iPhone, internetkaaga taraafikada wuxuu maraa tunnel sir ah oo aan qofna la socon karin.
Ku-dhex-wareegga shabakadda ama ku-wareejinta shabakad Wi-Fi oo aan la hubin waxay ka dhigan tahay inaad soo bandhigi karto macluumaadkaaga gaarka ah iyo howlaha daalacashada. Laakiin, iyada oo la adeegsanayo VPN, hawlahaaga internetka ayaa sugan oo gaar ah.
Qarsoonaanta iyo qarsoodinimada ay VPN bixiso waxay kaa caawineysaa ilaalinta howlahaaga internetka: dirista emaylka, dukaamaysiga internetka, ama bixinta biilasha. VPN -yada ayaa sidoo kale kaa caawiya in shabakaddaada si qarsoodi ah loo qariyo.
VPN -yada ayaa asal ahaan ka abuuraya tunnel xog u dhexeeya shabakadda deegaankaaga iyo barta bixitaanka ee meel kale, taas oo noqon karta kumanaan mayl, taasoo ka dhigaysa inaad mooddo inaad meel kale joogto. Faa'iidadani waxay u oggolaanaysaa xorriyadda onlaynka ah, ama awoodda aad ku heli karto barnaamijyada aad jeceshahay iyo bogagga intarneedka markaad socoto.
Waxaa jira dhinac kale oo u gaarka ah. La'aanta VPN, adeeg bixiyahaaga internetka ayaa garan kara taariikhdaada daalacashada oo dhan. Iyada oo la adeegsanayo VPN, taariikhda raadintaadu waa qarsoon tahay.
Taasi waa sababta oo ah waxqabadkaaga shabakadda ayaa la xiriiri doona cinwaanka IP -ga ee server -ka VPN, ee ma aha adiga. Adeeg bixiyaha VPN waxaa laga yaabaa inuu yeesho adeegayaal adduunka oo dhan.
Taas micnaheedu waa hawsha raadintaadu waxay u ekaan kartaa mid kasta oo iyaga ka mid ah. Maskaxda ku hay, makiinadaha raadinta ayaa waliba raadraaca taariikhda raadintaada, laakiin waxay ku xiriirin doonaan macluumaadkaas cinwaan IP ah oo aan adiga ahayn.
Mar labaad, VPN -gaagu wuxuu si gaar ah u ilaalin doonaa hawlahaaga internetka.
Faa'iidooyinka Isticmaalka VPN
Afarta faa iido ee ugu waaweyn ama faa'iidooyinka VPN waa:
#1 Beddel goobtaada - Adigoo wata VPN, waxaad ku beddeli kartaa cinwaankaaga IP wax kasta oo ay tahay waxaad rabto. Aan soo qaadano tusaale ahaan, haddii aad joogto Jarmalka oo aad rabto inaad u baarto sida haddii aad joogto Boqortooyada Midowday, waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad u beddesho VPN -gaaga kan UK.
#2 Ilaali asturnaantaada - Beddelka ciwaanka IP-gaagu waxa ay ka ilaalinaysaa aqoonsigaga mareegaha, apps-ka, iyo adeegyada raba inay ogaadaan goobtaada oo ay kula socdaan. Isticmaalka VPN hawlahaaga waxaa lagu ilaaliyaa sir adag.
#3 Kordhi amnigaaga - Isticmaalka VPN waxay ka ilaalinaysaa qalabkaaga nooc kasta oo jebinta amniga ah sida; baakooyinka dhuuqa, shabakadaha Wi-Fi-ga xun, iyo weerarrada dhex-dhexaadka ah. Marka VPN-gaagu shidmay, waxaad samayn kartaa wax kasta oo aad rabto inaad samayso xataa marka aad ku xidhan tahay Wi-Fi dadweynaha.
#4 Fur shabakadaha
Weligaa ma la kulantay bog ama degel xaddidan oo ka dhashay goobtaada? Hadday haa tahay, waan hubaa inaad ogtahay inta xanuunku noqon karo. Iyada oo la adeegsanayo VPN, waxaad marin u heli kartaa degel kasta oo qufulan adigoo si fudud u dhaafaya dab -damiska.
Sidee ayuu u shaqeeyaa VPN?
Markaad xiriir internet la sameysato VPN, barnaamijka VPN ee aaladdaada (oo sidoo kale loo yaqaan a Macmiilka VPN) abuuraa xiriir sugan oo leh a Adeegaha VPN.
In kasta oo taraafikadaadu weli dhex marayso ISP -gaaga, ISP -gaagu mar dambe ma akhrin karo oo la socon karo dhaqdhaqaaqyada.
Intaa waxaa sii dheer, websaydhada aad booqato mar dambe ma arki doonaan cinwaankaaga IP -ga asalka ah, laakiin cinwaanka IP -ga ee server -ka VPN, oo ay wadaagaan isticmaaleyaal kale oo badan oo si joogto ah isu beddelaya.
13 VPN ee ugu Fiican Isticmaalayaasha Android iyo iPhone
Liiskan VPN -yada ugu fiican ee aaladaha mobilada waxaa loo kala jabin doonaa laba qaybood; VPN ugu fiican ee Android iyo VPN ugu fiican ee adeegsadayaasha iPhone.
Qiimayntayada VPN-yada ugu wanaagsan ee Android iyo iPhone waxa la samayn doonaa iyada oo ku saleysan xawaaraha, amniga, qulqulka, taageerada macaamiisha, iyo fududaynta isticmaalka. Tilmaamahan muhiimka ah ayaa ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu go'aamiyo xoogga VPN.
Fadlan ogow, liiskan laguma diyaarin hab gaar ah.
ARAG SIDOO KALE: Avast vs Norton: Antivirus -ka ugu fiican sanadka 2022 ee PC -yada, Mac, iyo Qalabka kale
VPN ugu fiican ee adeegsadayaasha Android
In kasta oo inta badan VPN-yada ay u adeegaan aaladaha Android iyo iOS, doorashada VPN-ka ugu fiican ee Android waxay noqon kartaa mid adag. Sidaa darteed, qaybtani waxay u muuqataa inay iftiimiso VPN-yada ugu fiican ee Android, sida ay u eg yihiin, iyo sida ay u shaqeeyaan.
12 bilood - US $ 6.67/mth
6 bilood - US $ 9.99/mth
1 bilood - US $ 12.95/mth
ExpressVPN ayaa ugu horreysa liiskayaga ugu fiican VPN ee adeegsadayaasha Android. Iyada oo leh in kabadan 160 goobood oo server ah in kabadan 90 waddan, ExpressVPN waxay ku guuleysatay inay ku sii ahaato mid aad u fiican madal kasta iyo daalacasho kasta.
Way fududahay in la dejiyo oo la fahmo maaddaama adeegsadayaashu ay si aan kala go 'lahayn isugu xirmaan. Xulashada Asturnaanta iyo Aaladaha Amniga ayaa ku daraya qaar ka mid ah astaamaha waxtarka leh si ay kaaga caawiyaan hubinta isku -xirnaantaada, oo leh ikhtiyaarro lagu muujiyo cinwaankaaga IP -gaaga hadda iyo meesha aad joogto, ka hubso daadinta DNS iyo WebRTC iyo soo saarista furayaasha sirta ah - sidaa darteed shaqooyin badan ayaa u badan ExpressVPN macaamiisha desktop -ka cabsida leh.
Si aad u fuusho, waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa inaad soo dejiso barnaamijka ExpressVPN Android. Ka dib, waa inaad ku xirnaataa VPN adoo gujinaya badhanka On iyo xulashada goobta server VPN.
Adigoo adeegsanaya barnaamijka ExpressVPN Android, waxaad marin u yeelan kartaa; goobo badan oo VPN ah, si otomaatig ah ugu xir Wi-Fi aan la aamini karin, xawaaraha ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka ah, tunnel-ka kala jabay, is-dhexgalka luqadaha badan, xallinta app-ka, iyo kuwa kale oo badan.
Akhri ALSO: Sida loo helo barnaamijyo qarsoon aaladaha Android iyo iPhone
Surfshark waa VPN horseed u ah warshadaha oo leh in ka badan 3200 server oo ku kala yaal 65 dal. Waxay qarinaysaa dhammaan taraafikada intarneedka ee loo soo diray lagana soo diray aaladdaada. Sidoo kale, VPN -ka Android wuxuu qariyaa cinwaankaaga IP si loo hubiyo in qofna uusan arki karin waxaad ku sameyso internetka.
Tilmaamaha Surfshark VPN
Shabakadda nadiifka ah
Aaladaha aan xadidnayn
Hel Surfshark VPN si aad u ilaaliso dhaqdhaqaaqyadaada qadka ee aaladdaada Android.
Faahfaahinta oo dhan ka eeg Qiimaha Proton VPN.
ProtonVPN waa adeeg bixiye shabakad khaas ah oo khaas ah oo ay maamusho shirkadda Swiss Proton Technologies AG, oo ah shirkadda ka dambeysa adeegga emaylka ee ProtonMail.
Proton VPN waxay sugtaa oo ilaalisaa xogtaada iyo howlahaaga internetka. Shirkaddu waxay si gaar ah u isticmaashaa ciphers leh Perfect Forward Secrecy taas oo xaqiijinaysa in xogtaada taraafikada ee qarsoon aan dib loo qori karin.
Waxqabadka ugu wanaagsan, Proton VPN waxaa loogu talagalay inay fududaato in la isticmaalo oo adeegayaal xawaare sare leh ayaa loo isticmaalaa si loo hubiyo isku xirnaanta degdegga ah. Dhammaan adeegayaasha ProtonVPN waxay leeyihiin ugu yaraan 1 Gbps bandwidth iyo isku xirnaan ilaa 10 Gbps.
Waa kuwan astaamo dhowr ah oo la xusuusto:
Ka hortagga daadinta ee DNS
WAA INAAD AKHRISO: 10 VPN ee ugu Fiican Torrenting -ka 2022
$ 3.49 bishiiba
$ 31.49 sanadkiiba
Iyada oo leh 1600 VPN server oo ku kala baahsan 75 goobood, IPVanish VPN waxaa ka go'an in ay siiso macaamiisha daryeelka tayada ay mudan yihiin.
Si aad u bilowdo isticmaalka IPVanish ee Android, waxaad u baahan doontaa inaad booqato Google Play Store ee qalabkaaga gacanta oo aad ka raadiso IPVanish si aad u soo dejiso oo aad ugu rakibto app IPVanish.
Ka dib markii aad si guul leh ugu rakibtay IPVanish ee Android qalabkaaga gacanta, waxaad diyaar u noqon doontaa inaad furto app-ka oo aad ku xidho adeegayaashayada VPN markii ugu horeysay.
App-ka IPVanish Android waa mid dareen leh in la isticmaalo taas oo muhiim ah maadaama aan inta badan isku aragno shabakadaha Wi-Fi-ga dadweynaha ee lugeynaya waddooyinka New York ama aan istaagno ka shaqeynta dukaanka qaxwaha ee aannu jecelnahay.
Appku waxa kale oo uu ku faanaa 4.5-xiddig dukaanka app ka in ka badan 45,000 oo qiimayn ah, marka ma nihin kuwa kaliya ee ku qanacsan.
Iskudhufasho iyo Kala -Bixin Tunneling
Muuqaalka dib -ugu -xiridda otomaatiga
$ 5.00 bishii - Eeg baakadaha qiimeynta oo buuxa halkan.
Iyada oo la ilaalinayo cinwaanka IP, 24/7 taageero macmiil, in ka badan 70 goobood oo server -ka adduunka ah, iyo qarsoodi xoog leh, waxaad heli doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u hubiso daalacashada aaminka ah iyo marin u helka waxyaabaha ka imanaya meel kasta oo adduunka ah adiga oo adeegsanaya VyprVPN.
VyprVPN ee loogu talagalay Android wuxuu bixiyaa dhammaan astaamaha amniga ee aad uga baahan tahay VPN, oo lagu buuxiyey app-saaxiibtinimo leh. Waxay leedahay qarsoodi 256-bit ah, logs ma leh, ilaalinta daadinta DNS, iyo beddel toos ah oo dilaa ah.
Teknolojiyadda Chameleon ee gaarka loo leeyahay ayaa isku duubaysa OpenVPN metadata si ay ugu ekaato taraafikada caadiga ah ee ku hoos jirta kormeerka baakadka qoto dheer. Tani waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala waddamada xaddidan sida Shiinaha iyo Ruushka inay adeegsadaan VyprVPN iyadoon la ogaan.
Ilaalinta Wi-Fi Dadweynaha
Xidhiidhka App kasta
$ 12.95 bishiiba
$ 5.49 bishii - 1 sano
$ 3.29 bishii - 2 sano
$ 2.50 bishii - 3 sano
Sidoo kale liiskayaga ugu fiican VPN -yada Android waa SaferVPN. Iyada oo la adeegsanayo Safervpn, adeegsadayaasha Android waxay ku dhex daalacan karaan internetka iyagoon lahayn xuduud iyo cabsida xog -daadinta. Waxay hubisaa internetka waxayna u oggolaaneysaa isticmaaleha inuu si gaar ah u fiirsado.
Si la yaab leh oo ammaan u ah VPN waxay hubisaa xawaaraha isku xirka degdegga ah, sirta heerka bangiga, amniga Wi-Fi-ga dadweynaha oo toos ah, iyo in ka badan 1300 oo adeeg oo caalami ah.
Ma lihid wax aad lumiso iyo wax kasta oo aad ku hesho dalabkayaga Android VPN ee dareenka leh iyo dammaanadda 30-maalmood ee soo-celinta lacagta.
Nabadgelyada heerka bangiga
Wareejinta Dilka VPN
256-Bit Qarsoodi Xooggan
Amniga Wi-Fi otomaatig ah
Taageerada macaamiisha 24 / 7
Xulashada server -ka otomaatiga ah
Kordhinta wakiilo biraawsar
SaferVPN waxay bixisaa adeegsi saaxiibtinimo leh, si sahlan loo rakibi karo waxayna leedahay 4.7-xiddig qiimeyn Dukaanka Play. Waxay ka shaqeysaa 1,300+ server oo ku kala baahsan 50 dal.
2 Sano - US $ 3.71/mth
1 Sano - US $ 4.92/mth
1 Bil - US $ 11.95/mth
Ku xigta liiskayaga VPN -yada ugu fiican ee loogu talagalay Android waa NordVPN. NordVPN waa xulasho aad u fiican dadka isticmaala iPhone.
App-ka waxaa ku jira qaab si toos ah ugu xira VPN-ka marka ay ogaadaan inaad isticmaaleyso shabakad aan la aamini karin ama Wi-Fi.
Iyo dhammaan sifooyinka qotodheer ee aad ka dalban lahayd xitaa macaamiisha desktop-ka ugu fiican: menu borotokool si buuxda u muuqda, liisaska server-yada gaarka ah, liisku wuu socdaa.
NordVPN waxay taageertaa heerka-warshadeedka 256-bit encryption waxayna bixisaa is-beddel otomaatig ah, oo ay weheliso sirta xogta laba-geesoodka ah, taas oo xogtaada u gudbisa laba server VPN oo kala duwan.
NordVPN waxay ku faantaa waxqabad aad u wanaagsan-gaar ahaan hadda xawaaraha ayaa lagu xannibay iyada oo la adeegsanayo borotokoolka NordLynx ee WireGuard-shabakaduna waxay ku faantaa tiro aad u badan oo server ah oo ka badan 5,000 oo dhan.
VPN ugu fiican ee adeegsadayaasha iPhone
Isticmaalka iPhone VPN wuxuu hubiyaa inaad sii ahaato mid aan la arkin intaad daalacanayso. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad ilaaliso asturnaantaada dhijitaalka ah, iyadoo sidoo kale kuu oggolaaneysa astaamo kale oo hagaagsan sida marin u helidda waxyaabaha xaddidan ee juquraafi ahaan iyo ka-gudubka faafreebka.
Halkan waxaa ah liiska VPN-yada ugu fiican ee isticmaalayaasha iPhone.
ExpressVPN ayaa ugu horreysa liiskayaga ugu fiican VPN ee adeegsadayaasha iPhone. Iyada oo leh in ka badan 160 goobood oo server ah in kabadan 90 waddan, ExpressVPN waxay ku guuleysatay inay ku sii ahaato mid aad u fiican madal kasta iyo biraawsar.
Waxaa ku xiga liiskayaga VPN -yada ugu fiican iPhone waa NordVPN. NordVPN waa xulasho aad u fiican dadka isticmaala iPhone.
App-ka waxaa ku jira astaamo si otomaatig ah isugu xira si otomaatig ah loogu xiro VPN markay ogaato inaad isticmaaleyso shabakad aan la aamini karin ama Wi-Fi. Iyo dhammaan astaamaha qoto-dheer ee aad ka dalban lahayd xitaa macaamiisha desktop-ka ugu fiican: liistada borotokoollada si buuxda loo muujiyey, liisaska server-ka gaarka ah, liistadu way socotaa.
24 Bilood - US $ 2.49/mth
6 Bilood - US $ 6.49/mth
1 Bil - US $ 12.95/mth
Miyaad la yaabtay inaad ku aragto Surfshark liiskayaga ugu fiican VPN ee adeegsadayaasha iPhone? Waan hubaa inaadan ahayn. Surfshark si la yaab leh bay u tahay badbaado in la isticmaalo, waxay leedahay astaamo badan oo amni oo xoog leh oo celcelis ahaan VPN uusan bixin, aadna u adeegsada. Iyada oo ay ka badan yihiin 3,200 server -yo gaar loo leeyahay oo ku baahsan 65 goobood oo ay ku jiraan saldhigooda guryo ku yaal New York, Surfshark waxay umuuqataa ikhtiyaar wanaagsan oo lagu qarin karo taraafikada webka.
Surfshark waa VPN aad u wanaagsan, oo leh AES-256 xoogaa sir ah, beddelaad dil ah, tunnel kala qaybsan, Netflix, iyo marin qulqulaya, oo lagu daray xarun ka baxsan isbahaysiga shanta indhood.
IPhone VPN app waa wax ka badan ama ka yar la mid ah waxa aad ka hesho khibrada miiska Surfshark.
Waxaa jira liis isku mid ah, isku xirka multihop, ka hortagga xayaysiiska iyo malware, iyo tunnel-ka kala qaybsan ee abka iyo mareegaha kuu ogolaanaya inaad VPN-kaaga ku xidho kaliya markaad isticmaalayso abka kale ee la doortay.
Waxaa jira dil go'an sidoo kale, kaas oo laga yaabaa in aad u leexin jidka bixiyaha this haddii ay tahay shaqo aad u malaynayso inay waxtar u yeelan doonaan on your iPhone.
$ 9.00 - Qorshe bille ah
$ 4.08 - Qorshe sannadeed
WindScribe waa iPhone VPN aad u xiiso badan oo leh astaamo waaweyn oo si sahlan loo isticmaali karo. Windscribe waxay qarisaa hawshaada daalacashada, waxay xannibtaa xayeysiisyada, waxayna furtaa waxyaabaha madadaalada
Iyada oo ay ku yaalliin 110 magaalo oo ku baahsan 63 waddan, appku wuxuu taageeraa borotokoolka cusub ee WireGuard ee dhalaalaya, xawaaraha isku xirka halkan waa cajiib.
Taasi waxay la macno tahay inaad si kalsooni leh uga tagi karto Windscribe oo ku shaqaynaysa gadaasha markaad maqan tahay oo aad isticmaalayso Wi-Fi-ga guud iyo xogta gacanta, adoon ka welwelin in iPhone-kaagu hoos u dhaco markaad qulqulayso ama dul wareegayso.
Windscribe VPN waa bilaash in la isticmaalo.
Qorshaha billaha ah- US $ 3.49/bishii
Qorshaha sanadlaha ah - US $ 34.99/sanadkii
IPVanish waxa uu noo suurtageliyay in aan isku mar ku xidhno ilaa toban ka mid ah aaladahayada oo aanu si fiican u daboolno baahiyahayaga qulqulka ah. Iyada oo la heli karo server-yada baahsan, dhaqdhaqaaqa internetku waa mid dhakhso badan oo la isku halleyn karo.
Hubaal, qiimahoodu wax yar ayuu ka sarreeyay celceliska, laakiin ra'yigeenna, IPVanish waa u qalantaa waana sababta ay noogu tahay liiskayaga VPN-yada ugu wanaagsan ee iPhones.
App-ka IPVanish iOS waa mid dareen badan leh in la isticmaalo taas oo muhiim ah maadaama aan inta badan isku aragno shabakadaha Wi-Fi-ga dadweynaha ee ku socda waddooyinka New York ama aan istaagno ka shaqeynta dukaanka qaxwaha ee aannu jecelnahay.
Qorshaha Bisha 1 - $ 12.99
3 sano + 3 Bilood - $ 2.25
12 Bilood - $ 3.99
Waxaa lagu aasaasay 2011 Bucharest, Romania, CyberGhost waa abuuraha mid ka mid ah xalalka qarsoodiga iyo amniga adduunka ugu aaminka badan adduunka. Shirkaddu waxay xaqiijineysaa oo qarinaysaa joogitaanka khadka tooska ah ee in ka badan 36 milyan oo isticmaale adduunka oo dhan.
Iyada oo la adeegsanayo CyberGhost VPN, waxaad ku joogi kartaa si aan la ogaan karin oo qarsoodi ah onlayn hal mar oo kaliya si aad ugu xidho mid ka mid ah adeegayaashooda VPN oo aad ugu raaxaysato ilaalinta VPN buuxda.
Taasi waa sababta oo ah borotokoolkayada VPN ee ugu heerka sarreeya iyo heerarka sirta ayaa kaa ilaalinaya tuugada iyo tuugta xitaa marka aad isticmaaleyso shabakadaha Wi-Fi ee aan la hubin.
Iyada oo leh in ka badan 6800 server VPN adduunka oo dhan, AES 256-bit encryption, DNS iyo ilaalinta daadinta IP, is-beddelka tooska ah, baaxadda xad-dhaafka ah iyo taraafikada, iyo tiro wanaagsan oo astaamo yaab leh, CyberGhost wuxuu xoojiyaa amniga internetka wuxuuna ilaaliyaa qarsoodiga dhijitaalka ah.
Waxaad u adeegsan kartaa astaantooda Goobta Adeegga ugu Wanaagsan si aad si otomaatig ah kuugu hesho server -ka kuugu fiican, ama aad uga dhex doorato liistadayada soo -dejinta iyo qulqulka server -yada la hagaajiyay.
Halkan guji si aad isu qorto
Adeegsiga internetka taleefankaaga Android ama macruufka ma aha mid gaar loo leeyahay ama ammaan ah sida aad u malaynayso. Nasiib wanaag, barnaamijyada Android VPN ugu fiican iyo iPhone VPN -yada ku taxan qoraalkan ayaa kaa caawin kara ilaalinta isgaarsiintaada gacanta. Si fiican u samee si aad uga faa'iidaysato hagahan. Farxad!
avg.com - Tusaha ugu dambeeya ee Shabakadaha Gaarka loo Leeyahay (VPN)
techradar.com - iPhone -ka ugu fiican VPN 2022
cnet.com - IPhone -ka ugu fiican ee 2022
ammaanka.org - VPN -ka ugu fiican ee iPhone ee 2022
10 VPN ee ugu Fiican Torrenting -ka 2022
Sida Lacag Looga Sameeyo iPhone -kayga 7 -da Barnaamij 2022 -ka
15 Barnaamijyada Lacag -Sameynta ugu Fiican ee iPhone Degdegga ah | 2022 Liiska
Sida loo tirtiro barnaamijyada iPhone 2022 | Tilmaan Buuxo
Sida Loo tirtiro Barnaamijyada Chromebook | Tilmaan-Talaabo Talaabo-Fudud oo Fudud
10 -ka ugu Fiican Barnaamijyada Scanner HD ee Bilaashka ah ee Dukumiintiyada 2022
Dukumiintiyada waraaqaha ayaa aad u fiican in gacanta lagu hayo si loo abtirsado laakiin la wadaago oo la hubiyo in la hayo…
Weed, dheri, xashiishad, ama sigaar cabbista marijuana waa mid ka mid ah caadooyinka adag ee ay ku hawlan yihiin dadka da'da ah…
Sida Loogu wareejiyo Muusikada Kombiyuutarka loona wareejiyo iPhone sanadka 2022 | Tilmaan Fudud
Haddii aad tahay isticmaale macruufka ah, wareejinta heesaha waa xanuun. In ka badan kala bar dadka isticmaala macruufka ayaa leh tan…
Sida loogu daro Barnaamijyada Vizio Smart Tv | Hagaha Tallaabada Fudud
Telefishinada casriga ah ayaa si weyn u korsaday dadka da'da yar. Sidaa darteed, ku tiirsanaanta weyn ee telefishanka Cable…
15 Buugaagta Fantasy -ka Ugu Fiican Adduunka | 2022
Aragtida qaldan waa la jebiyey, xudduudaha waa la isku khilaafay, iyo sixir, haa, sixir, la furay! Sixirka, gaar ahaan. In kasta oo laga yaabo in buugaagta khiyaaliga ahi ay leeyihiin waxyaabo...